Maraykanka oo Soomaaliya ugu Hanjabay Cunaqabatayn, Haddii Doorashadu Mudda-dhaafto. | Hargeysa World~Herald
SomaliaMaraykanka oo Soomaaliya ugu Hanjabay Cunaqabatayn, Haddii Doorashadu Mudda-dhaafto.
(Arbaca, 12-01-2022)-Dawladda Maraykanku waxay war ka soo saartay heshiiskii muqdishoku gaadheen madaxda Somaliya, kaas oo ku aadanayaa geedi socodka oorashooyinka.=, iyo in la dardar geliyo hawlaha doorashada. wixii taba shana ah la xalliyo.
Washinton, waxay soo dhowaysay heshiiskan ldhinacyadu muqdisho lu gaadheen iyo jadwalka cusub ee doorashooyinka.
Shirka Golaha wadatashiga Qaranka ayaa sagaalkii Janaayo ku soo gebageboobay magaalada muqdisho. Shirkan waxa goobjoog ahaa Ra’iisal wasaaraha Dawladda Federalka Somaliya Rooble iyo maamul goboleedyada sida Puntlaan, Jubbalaan, Galmudug, Hirshabeelle, koonfurgalbeed iyo guddoomiyaha Gobolka Banaadir.
Shirka Golaha wadatashiga Qaranka waxaa ka qayb galay midawga musharrixiinta iyo ururada rayid ah. Shirkan oo looga arrinsanaayey arrimaha doorashooyinka.
Shrikan wada tashi waxaa ka soo baxay qodobo taageeraya sidii loo sii wadi lahaa dadaalada suurta gelinaya qabsoomidda Doorahsooyinka.
“Shirka Golaha wada tashiga Qaranka ayaa looga hadlay, hagaajinta, hudfnaanta doorashada, dhammaystirka doorashada golaha shacabka. wkhtiyey doorashada Golaa Shacabka. Xaqiijinta amniga doorashada, iyo ka warbixinta guud ee amniga dalka iyo abaaraha”, ayuu yidhi afhayeenka Dawladda Somaaliya, Maxamed Ibraahim Mucallimuu.
Madaxweynaha Dawladda Federla Somaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa isna soo dhoweeyey qodobada shirka wada tashiga Qaranka.
ka dib Shirkii wadatashi ee Qaran iyo taageeradii Madaxweyne Farmaajo u muujiyey qodobada shirkaas ka soo baxay, dawladda Maraykanku waxay ku hanjabtay in ay cunaqabatayn saari doori doonto Madaxda Somaliya ee ka hortimaada ama carqaladaysa doorashooyinka iyo heshiisyada la gaadhay.
Afhayeenka Wasaaradda Arrimaha dibadda Maraykanka Ned Price oo arrinta cunaqabaynta Madaxda soomaaliya ka hadlay ayaa yidhi, “Maraykanku waxa uu ka warhayaa go’aankii sagaalkii bishan ay gaadheen golaha Golaha Wadatashiga ee Somaliya, waxaanu dhammaan xubnaha dawladda iyo maamulgoboleedyada ugu baaqaynaa in ay u hoggaansamaan jadwalka cusub ee doorashooyinka”.
isaga oo afhayeenku hadalkiisa sii wata waxa uu yidhi, “Maraykanku waxa uu diyaariyey tallaabo kasta oo macquula, waxaana kamid xannibaado dhanka socdaalka ah, anagoo jawaab uga dhigayna haddii dib u dhac ku yimaado hannaanka doorashada”.
Xafiiska wararka Hargaysa Herald.
Xafiiska Guud: Magaalada Hargeysa.